ကားကြုံလိုက်​လာသော ကျောင်းသူ (၃)ဦးကို မဖွယ်​မရာ လုပ်​ပြသည့် ယာဉ်​​မောင်းအား ဖမ်းဆီ... - ThutaStar
August 20, 2019 Thuta Star ပြည်တွင်းသတင်း 0
ကားကြုံလိုက်​လာသော ကျောင်းသူ (၃)ဦးကို မဖွယ်​မရာ လုပ်​ပြသည့် ယာဉ်​​မောင်းအား ဖမ်းဆီး
ကားကြုံလိုက်​လာသော ကျောင်းသား/သူ (၃)ဦးကို မဖွယ်​မရာပြုလုပ်​ပြသည့် ယာဉ်​​မောင်းအား ဖမ်းဆီးအ​ရေးယူ ကျောင်းတက်ရန် ကျွဲပွဲမြို့မှ လမ်းကြုံလိုက်လာ သောကျောင်းသူ(၂)ဦးနှင့်ကျောင်းသားတစ်ဦးကို (၂၂)ဘီးမောင်းယာဉ်မောင်းမှ ကားပေါ်တွင် မဖွယ်မရာပြုလုပ်ပြသဖြင့် အုတ်တွင်း(မြို့မ) ရဲစခန်းတွင်း ဖမ်းဆီးအရေးယူထားကြောင်းသိရ သည် …. ။
လမ်းကြုံလိုက်​လာသည့်​ အသက်​ (၁၄) နှစ်​အရွယ်​ ကိုးတန်း​ကျောင်းသူ (၂) ဦးနှင့်​ အသက်​ (၁၂) အရွယ်​ ခုနှစ်​တန်း​ကျောင်းသား (၁) ဦးတို့ကို ကား​ပေါ်တွင်​ ယာဉ်​​မောင်းဖြစ်​သူမှပုဆိုးလှန်​ကာ မိမိတန်​ဆာအား လက်​ဖြင့်​ကိုင်​ပြခဲ့သည့်​အတွက်​ အရေးယူဖမ်းဆီးထားကြောင်း၊ ကျွဲပွဲမြို့ ဘန့်​​ဘွေးကုန်းကျေးရွာအုပ်​စုမှ ​​အဆိုပါကျောင်းသူ/သားများမှာ အ.ထ.က (အုတ်တွင်း) သို့​ ကျောင်းတက်​ရန်​အတွက်​ နေ့စဉ် လမ်းကြုံကားများတားစီးပြီးကျောင်းသို့ သွားရောက်ရပါသည် …. ။ သြဂုတ်​လ (၁၉) ရက်​​နေ့ မနက်​ ၇းဝဝ နာရီအချိန်​ခန့်ကရန်ကုန်ဘက်​မှ မန္တလေးဘက်သို့ ယာဉ်မောင်း ဝင်းမော်(၂၄) ဂျပန်လမ်း ၊အင်းစိန်မြို့နယ်​နေသူ ​မောင်းနှင်​လာ​သော YGN-1L/6 – – – beiben truck ဖြူ/နီကျား (၂၂) ဘီး နောက်တွဲယာဉ်ခေါင်းခန်းမှ လမ်းကြုံ လိုက်​လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည် … ။
ရန်​ကုန်​-မန္တ​လေး လမ်း​ဟောင်း မိုင်တိုင် ၁၄၆/၂ နှင့် ၃ ကြား ကျောက်တလင်းရွာနှင့် တဲကြီးကုန်းရွာကြားအ​ရောက်​တွင် ယာဉ်မောင်းမှ​ မော်​​တော်​ယာဉ်​အား ရပ်တန့်ပြီး လိုက်ကာများကာချလိုက်​သဖြင့်​​ ကျောင်းသူ (၂) ဦးနှင့်​​ ကျောင်းသား (၁) ဦးတို့မှာ ​ကြောက်​လန့်​ပြီးဆင်း​ပြေးရန်ပြင်ဆင်စဉ် ယာဉ်မောင်းမှ ၎င်းတန်ဆာအား လက်ဖြင့် ကိုင်ပြသဖြင့် မှန်ပြတင်းပေါက်မှ အတင်းတိုးဝှေ့ ဆင်းခဲ့ပြီး မိဘများနှင့်​အတူ ကျွဲပွဲနယ်မြေရဲစခန်းသို့ သွားရောက် တိုင်တန်းခဲ့​ကြောင်းအဆိုပါစခန်းမှ သိရသည်​ …. ။ အုတ်တွင်းမြို့(မြ်ို့မ)ရဲစခန်းမှ တပ်​ဖွဲ့ဝင်​များသည်​ အုတ်​တွင်းမြို့နယ်​ ဥယျာဉ်တော်ကျေးရွာအုပ်စု မှော်ရောတံတားအနီး၌ အဆိုပါကားနှင့်​ယာဉ်​​မောင်းဖြစ်​သူအား ဖမ်းဆီးရမိထားပြီး အမှုဖွင့်အ​ရေးယူသွားရန်​ စီစဉ်​​ဆောင်​ရွက်​လျက်​ရှိသည်​ဟုသိရသည်​ … ။
ကားကွုံလိုကျ​လာသော ကြောငျးသူ (၃)ဦးကို မဖှယျ​မရာ လုပျ​ပွသညျ့ ယာဉျ​​မောငျးအား ဖမျးဆီး
ကားကွုံလိုကျ​လာသော ကြောငျးသား/သူ (၃)ဦးကို မဖှယျ​မရာပွုလုပျ​ပွသညျ့ ယာဉျ​​မောငျးအား ဖမျးဆီးအ​ရေးယူ ကြောငျးတကျရနျ ကြှဲပှဲမွို့မှ လမျးကွုံလိုကျလာ သောကြောငျးသူ(၂)ဦးနှငျ့ကြောငျးသားတဈဦးကို (၂၂)ဘီးမောငျးယာဉျမောငျးမှ ကားပျေါတှငျ မဖှယျမရာပွုလုပျပွသဖွငျ့ အုတျတှငျး(မွို့မ) ရဲစခနျးတှငျး ဖမျးဆီးအရေးယူထားကွောငျးသိရ သညျ …. ။
လမျးကွုံလိုကျ​လာသညျ့​ အသကျ​ (၁၄) နှဈ​အရှယျ​ ကိုးတနျး​ကြောငျးသူ (၂) ဦးနှငျ့​ အသကျ​ (၁၂) အရှယျ​ ခုနှဈ​တနျး​ကြောငျးသား (၁) ဦးတို့ကို ကား​ပျေါတှငျ​ ယာဉျ​​မောငျးဖွဈ​သူမှပုဆိုးလှနျ​ကာ မိမိတနျ​ဆာအား လကျ​ဖွငျ့​ကိုငျ​ပွခဲ့သညျ့​အတှကျ​ အရေးယူဖမျးဆီးထားကွောငျး၊ ကြှဲပှဲမွို့ ဘနျ့​​ဘှေးကုနျးကြေးရှာအုပျ​စုမှ ​​အဆိုပါကြောငျးသူ/သားမြားမှာ အ.ထ.က (အုတျတှငျး) သို့​ ကြောငျးတကျ​ရနျ​အတှကျ​ နစေ့ဉျ လမျးကွုံကားမြားတားစီးပွီးကြောငျးသို့ သှားရောကျရပါသညျ …. ။ သွဂုတျ​လ (၁၉) ရကျ​​နေ့ မနကျ​ ရးဝဝ နာရီအခြိနျ​ခနျ့ကရနျကုနျဘကျ​မှ မန်တလေးဘကျသို့ ယာဉျမောငျး ဝငျးမျော(၂၄) ဂပြနျလမျး ၊အငျးစိနျမွို့နယျ​နသေူ ​မောငျးနှငျ​လာ​သော YGN-1L/6 – – – beiben truck ဖွူ/နီကြား (၂၂) ဘီး နောကျတှဲယာဉျခေါငျးခနျးမှ လမျးကွုံ လိုကျ​လာခဲ့ကွခွငျးဖွဈသညျ … ။
ရနျ​ကုနျ​-မန်တ​လေး လမျး​ဟောငျး မိုငျတိုငျ ၁၄၆/၂ နှငျ့ ၃ ကွား ကြောကျတလငျးရှာနှငျ့ တဲကွီးကုနျးရှာကွားအ​ရောကျ​တှငျ ယာဉျမောငျးမှ​ မျော​​တျော​ယာဉျ​အား ရပျတနျ့ပွီး လိုကျကာမြားကာခလြိုကျ​သဖွငျ့​​ ကြောငျးသူ (၂) ဦးနှငျ့​​ ကြောငျးသား (၁) ဦးတို့မှာ ​ကွောကျ​လနျ့​ပွီးဆငျး​ပွေးရနျပွငျဆငျစဉျ ယာဉျမောငျးမှ ၎င်းငျးတနျဆာအား လကျဖွငျ့ ကိုငျပွသဖွငျ့ မှနျပွတငျးပေါကျမှ အတငျးတိုးဝှေ့ ဆငျးခဲ့ပွီး မိဘမြားနှငျ့​အတူ ကြှဲပှဲနယျမွရေဲစခနျးသို့ သှားရောကျ တိုငျတနျးခဲ့​ကွောငျးအဆိုပါစခနျးမှ သိရသညျ​ …. ။ အုတျတှငျးမွို့(မျွို့မ)ရဲစခနျးမှ တပျ​ဖှဲ့ဝငျ​မြားသညျ​ အုတျ​တှငျးမွို့နယျ​ ဥယြာဉျတျောကြေးရှာအုပျစု မှျောရောတံတားအနီး၌ အဆိုပါကားနှငျ့​ယာဉျ​​မောငျးဖွဈ​သူအား ဖမျးဆီးရမိထားပွီး အမှုဖှငျ့အ​ရေးယူသှားရနျ​ စီစဉျ​​ဆောငျ​ရှကျ​လကျြ​ရှိသညျ​ဟုသိရသညျ​ … ။
တောင်ကြီးသူရဲ့ ရိုးသားလွန်းလှတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ဂုဏ်ပြုခဲ့ရတဲ့ ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင် 👍 ငွေထက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ညီမလေးလိုလူမျိုးတွေ သိပ်ကိုရှားသွားပါပြီတဲ့..